1. Abantu abaninzi basebenzise ixesha elide ukusebenzisa iikhompyuter zeWindows kwaye bafumanisa ukuba iMac inzima ukuyisebenzisa, ungazi ukuba zeziphi izitshixo ezishushu, aziqhelananga, azilunganga, phofu iMac yinkqubo yokusebenza ezinzileyo. Inenkqubo yokhuseleko eyamkelwe kwilizwe liphela ekulula ukuyisebenzisa kunokuba ucinga. Namhlanje siza kwazisa ngendlela yokuthatha iifoto-skrini zeMac OS, iindlela ezininzi kwaye zilula kakhulu.
2. Ukubanjwa kwesikrini esipheleleyo ngokucinezela kwi-Shift + Command + 3 amaqhosha ngaxeshanye.
3. Xa kuvakala isandi se-snap Umzobo wekrini uza kugcinwa kwiDesktop kwaye unokusetyenziswa xa kufuneka njalo.
4. Ukubanjwa kwesityalo ngesandla ngokucinezela iShift + Command + 4 amaqhosha ngaxeshanye.
5. Uza kubona uphawu "" "olujikeleze isikhombisi semouse. Bamba iqhosha lasekhohlo kwaye urhuqe indawo ofuna ukuyidubula. Emva koko ukhulule imouse. Imifanekiso oyithathileyo iya kugcinwa kwiDesktop.
6. Umzekelo womfanekiso orekhodwe kunye nesityalo esikhethiweyo.
7. Ukubanjwa kwescreen kunye nokurekhodwa kwevidiyo ngokucinezela kwi Shift + Command + 5 amaqhosha ngaxeshanye.
8. Inkqubo iya kubonisa imenyu yokubamba njengoko iya kuboniswa emfanekisweni.
9. Ukusebenza kwemenyu nganye ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: ● Thwebula iscreen sonke ● Faka iwindow esebenzayo kuphela ● Ukubamba izityalo ngesandla ● Rekhoda yonke ividiyo yesikrini ● Rekhoda ividiyo ekhethiweyo yesikrini. Incwadana yesikhokelo ● Ukhetho lomsebenzi owongezelelweyo ● Faka iqhosha-Bamba okanye urekhode -qala ukurekhoda ividiyo. Xa ividiyo iqala ukurekhoda, ungayeka ukurekhoda nanini na ngokunqakraza ku "◻" uphawu kwi bar ephezulu yemenyu. Xa ucofa Yeka, ividiyo yakho iya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwiDesktop.
10. Nazi iingcebiso eziluncedo ezimbalwa zokukhawulezisa izinto ngelixa iMac yakho ithimba isikrini. Umboniso omncinci wefayile yomfanekiso uya kuboniswa kwikona esezantsi ekunene. Ungasebenzisa imouse ukucofa kwaye ubambe kumfanekiso wokujonga kuqala kwaye urhuqe kwaye uyilahle kwinkqubo ye-LINE okanye kuGoogle amadokhumenti ukuqhubela phambili okanye ukuqala kwakhona umsebenzi kwangoko.
11. Ukusuka kumzekelo ongentla, kunokubonwa ukuba abaphuhlisi beMac OS abanjengoApple banikela ingqalelo kwiinkcukacha ezincinci emsebenzini wabo. Nokuba uthatha umfanekiso-skrini onemisebenzi eyahlukeneyo onokukhetha kuyo. Gcina ixesha elininzi lokucheba iifoto okanye iividiyo. Unokungenisa ngaphakathi iifayili esele zigqithisiwe okanye ezisetyenziswe kwangoko. Kukho neengcebiso ezifanelekileyo zokusebenzisa iMac OS ukukunceda wenze umsebenzi wakho ube lula kwaye ukhawuleze. Cofa ukulandela iwebhusayithi yethu ukufumana iindaba ezinomdla kunye namanqaku esiza kuwabeka kwisiganeko esilandelayo.